Trump, oo ka careysiisay dagaal ka dhan ah miisaaniyadda ayaa ku hanjabay inuu xiri doono xuduudka Maraykanka iyo Mexico – Walaal24 Newss
December 29, 2018	0	By walaal24
Madaxweynaha Donald Trump ayaa Jimcihii ku hanjabay inuu xiri doono xuduudka Maraykanka iyo Mexico haddii Democrats ay sii wadaan ka soo horjeedka maalgelinta darbiga la soo jeediyay, laakiin ma uusan qeexin sida uu u fulin lahaa siyaasad noocan oo kale ah ama waxa macnaheedu yahay.
“Waxaan ku qasbanaaneynaa inaan xirno Xuduudda Koonfureed gebi ahaan haddii Demoqraadiyadu ayan naga siinaynin lacagta si ay u dhammeeyaan Daaruska” iyo sidoo kale bedelaan Sharciyada Laanta Socdaalka ee Qalbigeenna ah ee uu dalkeenna kufsado, “Trump ayaa tweeted.
Trump ayaa sameeyey khatarta ka hor laakiin aan la siin faahfaahin. Wadooyinka sharci darrada ah ayaa ku jira wadnaha khilaafkiisa oo ay la jiraan xisbiyada Demoqraadiyada ee ka badan maalgelinta loogu talagalay inay soo gudbiyaan dhamaan xuduudaha Maraykanka iyo Mexico.
Sidoo kale lama hubo sida xiritaanka xuduudku u saameyn doono socdaalka. Dad badan oo doonaya inay soo galaan Mareykanka waxay sheeganayaan magangalyo siyaasadeed, xukuumaddana waxaa laga rabaa inay tixgeliso codsigan iyada oo aan loo eegin xiritaanka xadka.
Xayiraadda dawladu qayb ahaan waxay bilaabantay ka dib markii Trump uu diiday inuu ku ansixiyo biilka ku-meel-gaadhka ah ee qarashka ah sababtoo ah waxa ka maqan yahay dakhliga buuxa ee derbiga. Dhanka kale, Senate Democrats, ayaa hor istaagtay qorshe dib loo eegay, oo ay ku jiraan lacagta derbiga, isagoo ku tilmaamay dhibaatada Trump oo ah lacag aan loo baahnayn.
Trump tweeted iyadoo ay calaamado muujinayaan in xidhitaanka xukuumadda ee bilawday todobaad ka hor ay u badan tahay inuu galo sanadka cusub iyo Golaha cusub.
Madaxda Golaha iyo Golaha Senatka ayaa sheegay in wax cod bixin ah aan la qorshayn xilliga dhow.
Shirwaynaha cusub ayaa la qorsheynayaa inuu ku qabsoomo Jan. 3, oo ay ku jiraan aqlabiyad cusub oo Dimuqraadi ah oo Aqalka Baarlamaanka ah.
Duufaantii Jimcaha ee Jimcaha ayaa ku soo beegantay, in laga yaabo in xiritaanka xudduudda koonfurtu ay hagaajiso ganacsiga Maraykanka ee Mexico, inkasta oo xiritaan buuxa ay hor istaagi lahayd dhaqdhaqaaqa alaabooyinka iyo adeegyada ka baxsan xadka.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale mar kale sheegay in uu tixgelin doono joojinta gargaarka shisheeye ee wadamada uu sheeganayo in aysan sameyn wax ku filan si loo joojiyo socdaalka, gaar ahaan waxa uu xusay Honduras, Guatemala iyo El Salvador.
Isagoo ku celceliyay hanjabaadiisa, Trump ayaa yiri hal xarfaha: “Ama annagu waxaan dhisi doonaa (dhammeeyaa) Dhagax ama waxaan xidhnaa Xadka.”
Bishii Oktoobar, kaliya dhowr toddobaad ka hor doorashooyinka xisbiyada muhiimka ah, Trump ayaa ku hanjabay inuu xiro xadka koonfurta.
“Waa inaan ugu yeeraa magaalo weyn oo ka mid ah shuruudaha, Mexico weydiiso in ay joojiso arrintan – haddii aan awoodin inaan sidaas sameeyo waan wici doonaa askariga Maraykanka iyo JOOJINTA KALA-DEE BEDDOON!” ayuu ku qoray Twitter.
Dhibaatada ayaa sidoo kale ku hanjabtay in ay xiri doonto xudduudaha – “si joogto ah haddii loo baahdo” – marka la eego 26-ka November, todobaadyo ka dib doorashooyinka Democrats ay ku guuleysteen kantaroolka Aqalka Maraykanka iyo sida khilaafka maalgelinta derbiga uu dhisay.
Safiiirka Soomaaliya ee Dalka Turkiga oo sheegay in wada hadallada Dowladda Federaalka iyo Somaliland dib u bilabanayo
Gorsoorayaashii Maxkamadda Sare dhawaantan la magaacabay oo maanta la dhaariyay
Wasiirka Arrimaha Dibadda oo Afur u sameeyay Safiirrada wadamada Islaamka iyo kuwa saaxiibada
Wasaaradda Wabarashada XFS oo shaacisay shuruudaha Imtixaanka laga rabo Ardada Shahaadiga
Ra’iisul Wasaaraha Soomaalia oo la kulmay ku-xigeenka Xog-hayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka
Golaha Sare ee Xukunka Suudaan iyo Isbahaysiga mucaaradka oo isku raacay golaha wadaagga ah
Daawo: Shirkii London oo lagu soo bandhigay kheyraadka Shidaalka ee Soomaaliya